Fanolanana zaza tsy ampy taona tao Andapa - Novetavetainy dia nambanan’ny anadahin-dreniny basy ilay zazavavy
Publié le mercredi, 13 septembre 2017
Lasa fahazaran’ireo olon-dehibe any amin’iny Faritra Sava iny indray ny fampiharana herisetra amin’ny zazavavy tsy ampy taona tato ho ato izay. Nanomboka ny faran’ny volana aogositra lasa teo dia nahenoana tranga fanolanana sy fanimbana zaza any an-toerana izay saika ho isan’andro ny fandrenesana izany.
Zazavavy vao 12 taona indray koa ny alin’alarobia 6 septambra lasa teo, no novetavetain’ny anadihin-dreniny nandritra ny fotoana nanaovan’ilay zaza fialan-tsasatra tany aminy. Tao Andapa no nitrangan’ny fanolanana. Araka ny tatitra voaray avy any an-toerana dia mpitsabo nentim-paharazana ity nanolana ny zanak’anabaviny ity ary efa niditra am-ponja noho ny fanararataona ara-nofo tamin’ny zaza tsy ampy taona ihany koa. Vao nahavita ny saziny izy izao efa nahavita ny hetsika mamoafady nataony tamin’ny zanany ity izao indray.
Voalaza fa niangavan’ity lehilahy 50 taona ity tamin’ny dadiny mitaiza azy ireto zazavavy kely roa mba handeha hiala-sasatra any aminy ao Andapa. “Samy manana ny efitrano fatorianay izahay roavavy ka tamin’io alina io dia nijaikojaiko niditra tao amin’ny efitranoko i dadatoa ary notapenany ny vavako. Nataony avokoa izay azony natao tamiko ka tsy afaka niantso vonjy intsony aho. Nambanany basy aho rehefa avy eo fa tsy mahazo miteniteny amin’olona fa vonoiny”, hoy ilay zazavavy. Ampitsoniny dia nody tany Sambava avy hatrany izy roavavy ka ranomaso no nahatongavan’ilay niharam-boina tao an-trano nitantara tamin’ny reniny. Nitondra fitarainana tamin’ny zokibe izay miandraikitra ny fianakaviana avy hatrany ity renim-pianakaviana ity mba hisian’ny fifampiresahana manoloana io fihetsika nataon’io mpiraitampo amin’izy ireo io. Voalaza fa naharitra herinandro ny fivoriana amin’ny fanapahan-hevitra tokony horaisina amin’ity havana nahavanon-doza ity. Nampalahelo anefa fa tsy nanaiky ny fitondrana ny raharaha any amin’ny mpitandro filaminana ilay lehibe ao amin’ny fianakaviana fa ny fitsaboana ilay zazavavy kely ihany no asaina raisiny an-tanana. Noentina notsaboina tamin’ny hopitaly ao an-tampon-tanànan’i Smabava ilay zazavavy ka efa manaraka fitsaboana sahaza azy izy ankehitriny, araka ny vaovao voaray avy any an-toerana. Nanamafy ilay lohan’ny fianakaviana fa efa nandaniana vola be io rahalahiny io tamin’ny fagnararataona zaza tsy ampy taona nataony nampiditra azy am-ponja teo ka Baraka ho an’ny fianakaviana raha mbola haverina any am-ponja indray ity farany. Ranomaso ihany no nataon’ny renin’ilay zazavavy satria tsy afaka manohitra ny fanapahan-kevitry ny fianakaviana ny tenany ka nifarana teo ny raharaha.